လက်ကား Rose Gold Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ရိုးသားဖြူစင်သည်။
Mirror acrylic sheet ကိုလည်း plexiglass သို့မဟုတ် pmma mirror board လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ပလပ်စတစ်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။လူကြိုက်များသော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်- မိတ်ကပ်မှန်၊ ထုပ်ပိုးပုံး၊ အနုပညာလက်ရာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။3mm သည် စျေးကွက်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး အထူဖြစ်သည်။အလင်းပြန်နိုင်သော မှန်ဘက်ခြမ်းကို အခွံခွာရလွယ်ကူသော ခိုင်ခံ့သော ဖလင်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။
● စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော အရောင်မျိုးစုံ၊
● ရေစိုခံ၊ ခြစ်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အနံ့မရှိသော ကျောဘက်တွင် အပြင်းထန်ဆုံး အကာအကွယ်၊
● စီမံဆောင်ရွက်ရလွယ်ကူပြီး သာမိုပုံစံကို မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်တွင်မဆို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
● ရိုးရိုးမှန်မျက်နှာပြင်အစား အညစ်အကြေးနည်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ အကွဲအပြဲခံနိုင်ရည်ရှိသော မှန်မျက်နှာပြင်၊
● High-reflection မှန်ပြီးပြီ;
● Excellent ကဓာတုခုခံမှုနှင့်လျှပ်ကာပစ္စည်း;
● ကော်နှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။
Acrylic mirror sheet သည် extruded acrylic sheet ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး electroplated mirror ပြီးသွားကာ ပန်းချီကား၏နောက်ကျောကို အကာအကွယ်ပေးရန်။ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော coating သည် မှန်ကိုကာကွယ်ရန် အပြင်းထန်ဆုံး၊ ရေစိုခံ၊ ခြစ်ရာနှင့် အနံ့မရှိသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤ hard coated anti scratch acrylic mirror sheet ၏ ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းသည် ခြစ်ရာများကို ဆန့်ကျင်ပေးရုံမျှမက၊ ရိုးရာ acrylic ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားသော coating ပစ္စည်း၊ ကြာရှည်ခံ၊ အနံ့မရှိသော၊ eco friendly ဖြစ်သည် ။ ၎င်းစာရွက်သည် လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုများစွာအတွက် လုံးဝကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများကို အတူတကွပေါင်းစပ်ထားသည်။
1. မင်းရဲ့ acrylic sheet က ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
2. စိတ်ကြိုက်အမြောက်အများ acrylic ပန်းကန်၏ အနိမ့်ဆုံးမှာယူမှုပမာဏမှာ အဘယ်နည်း။
ယခင်- မီးခိုးရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
နောက်တစ်ခု: ရွှေရောင် Acrylic မှန်ချပ် (0.6mm-10mm)